गुगल मेरो व्यवसाय: सूचीबद्ध गर्न डचटाउन गाइड - डचटाउनस्टाईल
गुगल मेरो व्यवसाय: सूचीबद्ध गर्नका लागि डचटाउन गाइड
Google मेरो व्यापार व्यवसायलाई गुगलमा सूचीबद्ध हुन मद्दत गर्दछ र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूले के देख्छन् नियन्त्रण गर्न। यस गाईडमा हामी तपाईलाई सेट अप गर्ने प्रक्रियामा हिड्नेछौं र यो पक्का गर्दैछ कि तपाईले आफ्नो उत्तम अनुहार अगाडि पाउनुभएको छ। र हो, यो नि: शुल्क हो!
जब तपाईं ग्राहकहरूमा पुग्न चाहनुहुन्छ डचटाउन र बाहिर, तपाईं गुगल मा देखिन आवश्यक छ। अधिकांश व्यक्तिहरू आजका दिनहरू केवल सबै चीजहरूको लागि Google तर्फ जान्छन्, विशेष गरी जब उनीहरू पसलहरू, सेवाहरू, वा कहीं नजिकै खानको लागि खोज्दैछन्। तपाईले अधिक सटीक जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, उत्तम गुगलले तपाईंको व्यवसायमा मानिसहरूलाई निर्देशित गर्न सक्छ।
DutchtownSTL हाम्रो डचटाउन साना व्यवसायहरू सफल हुन मद्दतको लागि समर्पित छ। यी गाईडहरू दुई मध्ये एक सहकार्य हो डचटाउन कमिटीहरू: पदोन्नति समिति र आर्थिक जीवन समिति। थप जानकारीको लागि र हाम्रो कुनै पनि समितिमा सम्मिलित हुन, भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
अधिक डचटाउन साना व्यवसाय संसाधनहरूको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय.
गुगल मेरो व्यवसाय वीडियो गाइड
डचटाउन निवासी र व्यवसाय मालिक जेनेसा वेस्टले तपाईंलाई गुगल मेरो व्यवसायमा सूचीबद्ध गरिएको तपाईंको व्यवसाय सूचीबद्ध भिडियो भिडियोमा लैजान्छ। उनीले उनको लागी लिस्टिंग सेट अप गरिन् सेन्ट लुइस मोबाइल नोटरी सेवा, गुगलमा सेट अप हुनका लागि तपाईंलाई सबै चरणहरू देखाउँदै। भिडियोसँग कुनै पनि प्रकारका व्यवसायका लागि सुझावहरू र युक्तिहरू छन्, तर विशेष गरी यो मूल्यवान छ यदि तपाईं सेन्ट लुइस क्षेत्रबाट वा सेन्ट लुइस क्षेत्रको विस्तृत व्यावामा सेवा प्रदान गर्ने मोबाइल व्यवसाय चलाउनुहुन्छ भने।
Google My Business واکथ्रुद्वारा चरण
यदि भिडियोहरू तपाईंको चीजको लागि पर्याप्त छैनन् भने, तल हामी तपाईंको गुगल मेरो व्यापार प्रोफाइल स्थापना गर्न चरणबद्ध चरण एक प्रस्ताव गर्नेछौं। यस गाईडले ईंट र मोर्टार व्यवसायको लागि रेष्टुरेन्ट वा पसल जस्ता प्रोफाइल स्थापना गर्न केन्द्रित गर्दछ, तर फेरि त्यहाँ धेरै सुझावहरू छन् जुन कुनै पनि प्रकारको व्यवसायमा लागू हुन्छ। तलको साथ अनुसरण गर्नुहोस्!
सुरू गर्नका लागि जानुहोस् google.com/business र अब प्रबन्ध गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई गुगल खातामा साईन ईन गर्न सोधिनेछ यदि तपाईं पहिले नै साईन ईन हुनुभएको छैन। यदि तपाईंसँग पहिल्यै गुगल खाता छैन (उदाहरणका लागि जीमेलको लागि), साइन अप गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
आफ्नो व्यवसाय खोज्नुहोस् र वर्गीकृत गर्नुहोस्
त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाईंको व्यवसाय गुगल मा पहिले नै हुन सक्छ। उनीहरूलाई नबुझीकन पनि, गुगलले तपाइँ र तपाइँको व्यवसायको बारेमा धेरै जान्दछ। तपाईंको व्यवसायको नाममा टाइप गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि केहि पनि पप अप हुन्छ। यदि तपाईंले आफूलाई सूचीमा फेला पार्नुभयो भने, यसको मतलब Google ले तपाईंको वेबसाइटमा अन्य वेबसाइटहरू, प्रयोगकर्ता योगदानहरू, वा अन्य स्रोतहरू मार्फत पहिले नै केही जानकारी स collected्कलन गरिसकेको छ। अब तपाइँको जानकारी को हक प्राप्त गर्न को लागी अवसर छ र यो सहि छ र यो मिति पक्का छ।
यदि तपाईंले माथिको चरणमा आफूलाई फेला पार्नुभएन भने, तपाईंले Google लाई तपाईं को हो थाहा दिनु आवश्यक छ। यो वाकथ्रुको लागि, हामी एउटा सानो सुविधा स्टोर खोल्न जाँदैछौं जसलाई दक्षिण साइड स्नैक शप भनिन्छ। तपाईंको व्यवसायको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को, तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय को लागी एक वर्ग को लागी सोधिनेछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। टाइप गर्न सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईको व्यवसायमा उत्तम फिट हुन्छ र गुगलले सुझाव दिन सुरू गर्दछ। तपाईं यहाँ मात्र एक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले यो सही छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। तपाईले एकपटक आफ्नो छनौट गरेपछि, जारी गर्न क्लिक गर्नुहोस्
गुगल नक्शामा तपाईंको व्यवसाय
गुगलले तपाईंलाई सोध्यो यदि तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि एक भौतिक स्थान थप्न चाहानुहुन्छ भने। यदि तपाईं ईंट र मोर्टारको पसल रेष्टुरेन्ट वा खुद्रा स्टोरको रूपमा चलाइरहनु भएको छ, वा यदि तपाईं कुनै खास स्थानमा व्यक्ति सेवाहरूमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, अघि बढ्नुहोस् र हो क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाइँलाई तपाइँको ठेगाना जानकारी, घण्टा, र यस्तै प्रविष्ट गर्ने मौका दिनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको घर बाट एक व्यापार चलाउन वा तपाइँको घर वा व्यवसाय मा मानिसहरु लाई तपाइँको सेवाहरु सीधा वितरण, तपाइँ कुनै चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को धेरै चरणहरूको लागि, हामी यो मान्दछौं कि तपाईंको व्यवसायको भौतिक स्थान छ।
अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईंको व्यवसायको भौतिक स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस्। हाम्रो नक्कली सुविधा स्टोर, दक्षिण साइड स्न्याक शप, सुविधाजनक रूपमा भित्र स्थित हुनेछ छिमेकी इनोवेशन केन्द्र हाम्रो भोकाहरूलाई सेवा गर्न स्वयंसेवक र समिति सदस्यहरु.
जब तपाईले आफ्नो ठेगाना टाइप गर्न थाल्नुहुन्छ, गुगलले तपाईको ठेगाना मान्य छ र ठीकसँग देखा पर्नेछ भनेर निश्चित गर्न मद्दतको लागि सुझावहरू पपअप गर्दछ गुगल नक्सा। Google नक्सामा देखा पर्नु विशेष गरी फुट ट्राफिक खोज्ने व्यवसायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जब कसैले "मेरो नजिकै बिक्रेता पसल" वा "डचटाउनमा रेष्टुरेन्टहरू" खोजी गर्दछ, तपाईको व्यवसाय नक्शामा गुगल नतिजाहरूको नजिकै देखिन सक्छ:
अब सम्भावित ग्राहकहरूले यो नक्शा तान्न सक्छन् र वास्तवमा के नजिकै छ हेर्नुहोस्। तपाईले प्रदान गर्ने अधिक जानकारी - र जब तपाई बढ्दै जानुहुन्छ, तपाईले जति धेरै समीक्षा र ध्यान पाउनुहुन्छ — त्यति नै तपाईलाई सुची सूचीबद्ध गरिनेछ।
अर्को विकल्पले तपाईंलाई Google लाई यदि तपाईं ईन्ट र मोर्टार स्थान भन्दा बाहिर ग्राहकहरूको सेवा गर्न बताउन अनुमति दिनुहुन्छ। यदि तपाईं एक रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ जुन वितरण गर्दछ वा निर्माण व्यवसाय जसले क्षेत्र सेवा गर्दछ, तपाईं यहाँ हो चयन गर्न चाहानुहुन्छ। यस उदाहरणका लागि, हामी केवल एक साधारण पसल स्थापना गर्दै छौं, हामी कुनै चयन गर्नेछौं। तर यदि तपाइँको व्यवसायहरु लाई ग्राहकहरु लाई चार चार पर्खालहरु भन्दा बाहिर सेवा गर्दछ, हामी यसमा फर्केर आउनेछौं र तपाइँलाई के गर्ने देखाउछौं।
सम्पर्क जानकारी र वेबसाइटहरू
सम्भावित ग्राहकहरू तपाइँसँग सम्पर्कमा रहन चाहान्छन्। अर्को स्क्रिनमा, तपाईंलाई केहि आधारभूत सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्न सोधिनेछ: तपाईंको फोन नम्बर र तपाईंको वेबसाइट। यदि तपाईंसँग पूर्ण विकसित वेबसाईट छैन भने, तपाईं यहाँ फेसबुक पृष्ठ जस्तो केहि लिंकको लागि विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
गुगलले तपाईंलाई साना वेबसाईट विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सोल Azteca, डचटाउनको दक्षिण ब्रॉडवेमा अवस्थित, यो विकल्प छनौट गर्दछ। सोल एजटेका गुगल वेबसाइटमा हेर्नुहोस् सम्भावनाहरूको विचार प्राप्त गर्न। हामी भविष्यका गाईडमा तपाईंको व्यवसायका लागि वेबसाइट स्थापना गर्ने कुरामा छलफल गर्नेछौं।
तपाईको सेटअप हुने बारे मात्र हो! गुगलले सोध्नेछ यदि तपाइँ "जान्नुहोस् मा रहन" चाहानुहुन्छ - यसको मतलब तपाईले कसरी इ-मेलहरू पाउनुहुनेछ तपाईको व्यवसाय गुगलमा कसरी चलिरहेको छ, र तपाईको प्रोफाइल कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा सुझावहरू पाउनुहुन्छ। यदि तपाइँ एक महिनामा केही थप ईमेलहरू प्राप्त गर्न आपत्ति मान्नुहुन्न भने, यो विकल्प क्लिक गर्न यो खराब विचार होइन।
र अब तपाईं सूचीबद्ध हुनुहुन्छ! तर त्यो केवल मेरो पहिलो व्यापार हो Google मेरो व्यापार मा तपाईंको व्यवसाय। जब तपाई यसलाई एक पटकको कार्यको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईको गुगल प्रोफाइलमा नजर राख्नुहोस् तपाईको सूचीलाई मजाई र आकर्षक बनाइराख्न। हामी तपाईंलाई यो पृष्ठको तल आफ्नो प्रोफाइल कसरी प्रबन्ध गर्ने भनेर देखाउने छौं।
तपाईको गुगल मेरो व्यवसाय प्रोफाइल ब्यबश्थापन गर्दै
हामीले माथि भनेझैं तपाईको गुगल मेरो ब्यवसाय प्रोफाइल प्रबन्धन कार्य चलिरहेको छ। जबकि हामी बुझ्दछौं कि साना व्यवसाय मालिकहरू पहिले नै व्यस्त छन्, निश्चित रूपमा अहिले र भविष्यमा तपाईंको प्रोफाइल प्रबन्ध गर्न केहि बढी मिनेट लिन लायक छ। फेरी, यो अब मान्छेले तपाईलाई कसरी फेला पार्दछ।
एकचोटि तपाईंले माथिको चरणहरू Google मा सूचीत गर्न सकिसकेपछि, तपाईंलाई तपाईंको प्रोफाइल विकास गर्न केही थप जानकारी प्रदान गर्न सोधिनेछ। तपाई सँधै यी विवरणहरू तपाईको गुगल मेरो व्यवसाय ड्यासबोर्डबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तर हामी यहाँ पहिलेदेखि नै भएकोले, तपाईंको प्रोफाइललाई अलग बनाउन केही थप स्पर्शहरू थपौं। अधिक पूर्ण प्रोफाइलले ग्राहकहरूलाई तपाईंको व्यवसायको राम्रो सिंहावलोकन देखाउँदछ।
तपाईंको व्यापार घण्टा सूचीबद्ध गर्नुहोस्
यदि तपाईं ईट्टा र मोर्टार स्थान चलाइरहनु भएको छ (वा यदि तपाईं ग्राहकलाई दिनको सबै समयमा कल गर्न चाहानु हुन्न), तपाईं आफ्नो व्यापार घण्टा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण साइड स्नैक्स शपमा पर्याप्त सीमित घण्टा छ किनकि हामी अन्यथा राखी व्यस्त छौं डचटाउन STL.org हाम्रा छिमेकीहरूका लागि अप टु डेट। तपाईं थप्न वा आवश्यक रूपमा तपाईंको समय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं आफ्नो घण्टा समावेश गर्नुहुन्छ, Google ले तपाईंको ग्राहकलाई यदि तपाईंको व्यवसाय हाल खुल्ला छ वा बन्द छ, र तपाईं अर्को खोल्ने जब भन्न सक्षम हुनेछ। यसले सहयोगी सुझावहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाईं "छिट्टै खोल्दै हुनुहुन्छ" जब तपाइँको व्यवसायको दिन नजिक आउँछ।
तपाईंको व्यवसाय वर्णन गर्नुहोस्
अर्को, तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को लागी एक विवरण प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं यसलाई छोटो राख्न सक्नुहुन्छ, तर गुगलले तपाईंलाई सबै 750० अक्षरहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छ जुन तपाईं उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। यो तपाइँको के बारे मा विशिष्ट प्राप्त गर्न को लागी एक राम्रो स्थान हो। उदाहरण को लागी, यसो भन्नुहोस् मात्र कि तपाई संग एक रेस्टुरेन्ट छ - अधिक बताउनुहोस्:
डचटाउन डाइनरले बर्गर, स्यान्डविच, र सलादहरू सहित क्लासिक अमेरिकी खाना सेवा गर्दछ। हामी हाम्रो ट्रिपल टर्की क्लबको लागि राम्ररी परिचित छौं, तर हामी सँगै बर्गरहरू, पग्लन्छन् र तपाईंको मनपर्ने परम्परागत पक्षहरू र अद्वितीय आइटमहरूको साथ र्‍यापको उत्कृष्ट चयन पनि पाउँछौं जुन तपाईंले कहिँ पनि भेट्नुहुने छैन!
हामी दैनिक एन्ट्री विशेष प्रस्ताव गर्दछौं जसमा मीटलोफ, पोर्क चप्स, र हाम्रो प्रख्यात भुनेको कुखुरा जस्ता भाँडा पनि समावेश छ। हामी अर्डर गर्न बनेको नास्ता पनि गर्छौं र हाम्रो स्वादिलो ​​स्यान्डविच, सूप, र सलादको विशेषता सहित खाजामा पनि।
हामी प्रत्येक ग्राहकलाई खुशी पार्ने लक्ष्य राख्छौं चाहे उनीहरूले खाना खान रोजे, जानको लागि लिन, वा तिनीहरूको डिनर डिलिभर गरे। आज डचटाउन डिनर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्!
अधिक विशिष्ट जानकारी सहित Google लाई तपाईंलाई राम्रोसँग जान्न मद्दत गर्दछ। तपाईका सम्भावित संरक्षकहरूले "रेस्टुराँ" मात्र खोजिरहेका छैनन् - हुनसक्छ उनीहरूले अझ खास कुरा प्रविष्ट गरे जस्तै "डचटाउनमा स्यान्डविच पसल" वा "मेरो नजीकको बर्गरहरू"। निश्चित गर्नुहोस् कि ती प्रकारका कीवर्डहरू समावेश गरेर तिनीहरूले तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन्।
केहि अन्य उदाहरणहरू:
रोंडाको रिसेल शपले महिला फेसनहरूको होशियारीका क्युरेट गरिएको चयन गर्दछ, जसमा कपडा, जीन्स, टी-शर्ट, र सबै आकृतिहरू, आकारहरू र शैलीहरूका महिलाहरूका लागि गहनाहरू समावेश छन्।
चाहे तपाईं शहरमा रातको लागि पूरै पोशाक खोज्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईंको गहनाको पूरक बनाउन उत्तम गहनाका टुक्राहरू, रोन्डडाको रिसेल शपमा अद्वितीय र एक्लेक्टिक चयन छ जुन तपाईंको लागि केहि समावेश गर्न निश्चित छ। हामी निरन्तर नयाँ आईटमहरू प्राप्त गर्दैछौं, त्यसैले सबै नयाँ फेसनहरू र ताजा फेला पार्न प्राय: हामीलाई भेट्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
हामीले प्रत्येक शैली र प्रत्येक सीजनको लागि केहि प्राप्त गर्‍यौं। अनौपचारिक क्लासिक्स, व्यवसायिक व्यवसायको लुगाहरू, र आश्चर्यजनक साँझको पोशाकको लागि रोन्डाको भ्रमण गर्नुहोस्।
गोन्जालेज करार एक पूरा सेवा निर्माण ठेकेदार हो जो सेन्ट लुइसको सुन्दर पुराना घरहरूमा काममा विशेषज्ञ छन्। हामी सबै आकारको निर्माण कार्यहरूमा काम गर्दछौं, साना मर्मतदेखि पूर्ण नवीकरण सम्म।
ऐतिहासिक पुनर्स्थापना र मर्मत सम्बन्धी हाम्रो विशेषज्ञताले तपाईंको ऐतिहासिक घरमा सौन्दर्य र चमक थप गर्दछ। हामीलाई तपाईंको टकपोइन्टिंग र ईंटवर्क आवश्यकताहरूको लागि कल गर्नुहोस्। हामी पनि मर्मत, पुनर्स्थापना, वा स्थानीय ऐतिहासिक भवन नियमहरू अनुसार सजावटी वास्तुकला तत्वहरू र ऐतिहासिक विन्डोजहरू स्थापना गर्दछौं।
थप रूपमा, हामी तपाईंको आँगन वा डेक योजनाहरू, तपाईंको भान्छाघर वा बाथरूम अपग्रेड, वा घर वरिपरिका अन्य प्रोजेक्टहरूको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं। हामीलाई आज नि: शुल्क अनुमान र रेफरलको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाईं वास्तवमै तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको आँखा लिन चाहनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको फोटोमा केही फोटोहरू थप्न। फोटोहरूले शब्दहरू भन्दा तपाईंको व्यापारिक र सेवाहरू राम्रो देखाउँछन्, र तिनीहरू सम्भावित ग्राहकहरूको लागि बढी आकर्षक छन्।
तपाईंको फोटो दुबैलाई रमाईलो र चापलुसी बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर हुनुहुन्न भने, साथी वा परिवारको सदस्यलाई सोध्नुहोस् जो एक अधिक आकर्षक शट तस्वीर गर्न सक्षम हुन सक्छ।
तपाईंलाई मनपर्ने जति फोटोहरू थप्नुहोस्। केहि विचारहरू:
रेस्टुरेन्टहरू: तपाईंको भोजन कोठा (या त खाली वा भीडको समयमा), तपाईं वा तपाईंको सफा र संगठित भान्छामा काम गर्ने शेफ, होसियारीसाथ भाँडा माझेर भाँडा माझ्ने, वा सर्वरहरू खाना खान टेबलमा लैजानुहुन्छ।
पसलहरू: तपाइँ वा तपाइँका कर्मचारीहरूले ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्छन् (निश्चित गर्नुहोस् कि ग्राहकहरू तपाइँको तस्बिर लिँदा र प्रयोग गर्न तपाईसँग ठीक छ), सबैभन्दा नयाँ व्यापारिक सामान, वा तपाईको पसलको भित्री भागमा तपाईको बृहत चयन र राम्रोसँग सम्भार गरिएको पसल देखाउँदै।
सेवाहरु: तपाइँ वा तपाइँका कर्मचारीहरु ग्राहकहरु संग काम गरीरहेको छ, प्रगतिमा र सम्पन्न परियोजनाहरु जुन तपाइँको कामको उच्च गुणस्तर प्रदर्शन गर्दछ, वा तपाइँ तपाइँको व्यवसाय अगाडि उभिनुहुन्छ।
आफैंको फोटो, तपाइँका कर्मचारीहरू र तपाइँका ग्राहकहरूले समावेश गर्दै सम्भावित संरक्षकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छन् तपाइँको व्यवसायमा अनुहारहरू जोडेर। निश्चित गर्नुहोस् कि कसैको सहमति प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईले अनलाइन पोष्ट गर्नुभएको फोटोहरूमा देखा पर्दछ।
तपाईं सेट अप हुनुहुन्छ!
तपाईंले आफ्नो गुगल मेरो व्यवसाय प्रोफाइल पूरा गर्नुभयो! अब तपाईसँग नियन्त्रण छ कि व्यक्तिले के देख्छन् जब तपाईको व्यवसाय गुगलमा देखिन्छ। तपाईं अब कम्प्युटरबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ, तर फेरी हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो भित्र जाँच गर्नु पर्छ गुगल मेरो व्यवसाय ड्यासबोर्ड समय समयमा। जाऊ त्यहाँ Business.google.com तपाईंको ड्यासबोर्ड पहुँच गर्न। ताजा फोटोहरू थप्दै राख्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको समय र जानकारी अप-टु-डेट छन्, र समीक्षालाई जवाफ दिनुहोस्।
यो गुगल मेरो व्यवसायको लागि हाम्रो डचटाउन गाइडको दोस्रो भाग अब प्रत्यक्ष छ! उन्नत सुविधाहरूको साथ अगाडि जानुहोस्, र ग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्नुहोस् र ताजा सामग्रीको साथ अप टु डेट राख्नुहोस्।
डचटाउनस्टेल र हाम्रो डचटाउन समितिहरु हाम्रो छिमेकी साना व्यवसायहरू सफल हुन मद्दतको लागि गाईडहरू उत्पादन गर्न र संसाधनहरू बटुल्न जारी राख्नेछ। मा अधिक स्रोतहरू खोज्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय, DutchtownSTL मेलिंग सूचीको लागि साइन अप गर्नुहोस्, र हामीलाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम सबै भर्खरको लागि हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ! यदि तपाईंसँग हामी कसरी डचटाउन व्यवसायहरू समर्थन गर्न सक्दछौंका लागि विचारहरू छन् भने स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 11th, 2021 .
डचटाउन STL.org हाम्रो डचटाउन व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दै गुगल मेरो व्यवसाय: सूचीबद्ध गर्नका लागि डचटाउन गाइड